မတျ 10, 2019 – Healthy Life Journal
၃ လခြားတစ်ခါ ခွဲစိတ်မှုခံယူရင်း ဓာတ်မတည့်မှု ဇာစ်မြစ်ရှာဖွေနေရသည့် ၁၁ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်
၊ ကိုထက် ၊ အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကမ်လတ်ဟာ အလွန်ရှားပါးတဲ့ ဝေဒနာတစ်မျိုးကြောင့် သုံးလတစ်ခါ ခွဲစိတ်မှုခံယူနေရပါတယ်။ သူဟာ အစားအသောက်တစ်မျိုးကြောင့် အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ ဓာတ်မတည့်မှုခံစားနေရပါတယ်။ သူဟာ ဓာတ်မတည့်တဲ့ အစာတစ်မျိုးကိုစားပြီးနောက် အလွန်ပြင်းထန်တဲ့အက်ဆစ်ဓာတ်တွေကို အန်ထုတ်တတ်ပြီး ဒီအက်ဆစ်တွေကြောင့် သူရဲ့လည်ချောင်းတစ်လျှောက်...
ဆီးခဏခဏသွားခြင်း (Overactive bladder)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၁။ လူနာအမေး ။ ဆရာရှင့်. . . သမီးအသက် ၃၇နှစ်ရှိပါပြီ။ အိမ်ထောင်ကွဲနေတာပါ။ တနာရီတခါ ရေသောက်ဆီးသွားလုပ်ရပါတယ်ရှင့်။ တနေ့ကို ရေ ၁၀လီတာ လောက်သောက်ပါတယ်။ မသောက်ရရင် မနေနိုင်လို့ပါ။ ညဘက်လည်း ၅ခါလောက်...
၀က်ခြံ၊ တင်းတိပ်၊ အရေးကြောင်းနှင့် အာဟာရ
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး. ၀က်ခြံ၊ တင်းတိပ်နဲ့ အရေးကြောင်းတွေဖြစ်တာက အာဟာရနဲ့ ဆိုင်ပါသလား။ ဖြေ. ဆိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီအကြောင်းပြောပြပါမယ်။ ၀က်ခြံ အချိုများများ စားတဲ့သူတွေက ၀က်ခြံတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ နေပူဒဏ်ခံရရင်လည်း ၀က်ခြံထွက်စေနိုင်ပါတယ်။ မနက်...